Tụnyere ndụ batrị nke Oukitel K12, Xiaomi Redmi Rịba ama 7 na iPhone XS | Gam akporosis
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị ahụla ka teknụzụ anyị nwere ike ịchọta n'ime ekwentị abawanyewo nke ukwuu, na-enye anyị, n'ọtụtụ ọnọdụ, ihu nwere ihu zuru oke. Ka o sina dị, batrị enwechaghị ọganihu na usoro nke oriri na oge, naanị nhọrọ bụ ịbawanye nha ya.
Ọ bụ eziokwu na ụdị nke ọhụụ nke iOS na gam akporo, dịka ndị nhazi anyị nwere ike ịchọta n'ime, na-enye anyị ike oriri siri ike, ndụ batrị ka dị oke. Iji dozie nsogbu a maka ndị ahụ na-eji njedebe ha kwa ụbọchị, Oukitel na-enye anyị Oukitel K12.
Oukitel K12 na-enye anyị batrị 10.000 mAh, batrị nke na-ejighị ihe ọ bụla, nwere ike ịdịru ruo ụbọchị 31 na njikere, dị ka onye nrụpụta si kwuo. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị ejiri ya dịka anyị nwere ike iji ama ọ bụla, a na-ahụta ikike ahụ.
Guysmụ okorobịa nọ na Oukitel ejirila ndụ batrị tụnyere ndị Oukitel K12, Redmi Rịba ama 7 na iPhone XS. Ma Xiaomi na iPhone nwere ikike batrị dị ala karị, mana site na nnwale a, anyị nwere ike ịhụ oriri ha na-egosi mgbe awa 4 nke ọkpụkpọ vidiyo na-adịghị akwụsị akwụsị nwere oke ọkụ na ụda.
Mgbe Oukitel K12 kwụsịrị 69% batrị ahụ, Xiaomi Redmi Rịba ama 7 ruru batrị 37%. IPhone XS nwere ihuenyo pere mpe karịa Oukitel na Xiaomi, jiri 10% batrị mechie ule ahụ. Valueskpụrụ ndị a ekwesịghị iju anyị anya ebe ọ bụ na iPhone XS nwere ikike batrị nke 2.658 mAh, ebe Xiaomi Redmi Note 7 ruru 4.000 mAh.
El Oukitel K12 na batrị 10.000 mAh, na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ekwentị anyị na-enweghị nchegbu gbasara batrị n'oge ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọnụ na-enyere gị aka iwepụ nchegbu kwa ụbọchị, ọnụ a nwere ike ịbụ nke ị na-achọ.
1 Ogologo oge ole ka batrị nke Oukitel K12 dịruru?
2 Kedu ihe Oukitel K12 na-enye anyị?
Ogologo oge ole ka batrị nke Oukitel K12 dịruru?
Na mgbakwunye na ịnye anyị ruo ụbọchị 30 nke ndụ batrị, na Oukitel K12 na-enye anyị awa 14.5 nke ọkpụkpọ vidiyo na ụda na nchapụta kachasị, Oge 54 nke egwu egwu na olu gbanwere ma gbanyụọ ihuenyo, 51 awa nke oku ekwentị na ihuenyo a kwụrụ ụgwọ na ruo 11 awa nke egwuregwu kachasị achọ na nchapụta na ụda gbanwere.
Kedu ihe Oukitel K12 na-enye anyị?
The Oukitel K12, na mgbakwunye na nnukwu batrị ahụ m kwuru n'elu, na-enye anyị a Ihuenyo 6,3-inch nwere mkpebi HD zuru ezu, tinyere 6 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa, ohere nke anyị nwere ike ịgbasa site na iji kaadị microSD nke 128 GB.
Banyere igwefoto, ọzọ ụmụ okorobịa si Oukitel nzọ na Sony na a 16 mpx sensor na azụ na ihe mmetụta 8 mpx n'ihu. Ọnụ ya dakọtara na bands 2,4 na 5 GHz Wi-Fi ma na-arụ ọrụ na mba niile nke ụwa ekele maka nkwado ọ na-enye maka ndị otu 21.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oukitel K12, Xiaomi Redmi Rịba ama 7 na iPhone XS ndụ batrị